Irana: Ireo mpitoraka blaogy Armeniana sy ny fianjeran’ny fiaramanidina · Global Voices teny Malagasy
Irana: Ireo mpitoraka blaogy Armeniana sy ny fianjeran'ny fiaramanidina
Voadika ny 27 Jolay 2009 6:08 GMT
Raha nianjera ilay fiaramanidina mpampitohy mahazatra niala tao Tehran ho any Yerevan taorian’ny niaingany omaly, namoizana ireo olona 168 tao anatiny, dia maro ny tany Armenia sy ny Diaspora avy any no ory, indrindra indrindra noho ny fisian'ny Armeniana 40 tamin’ireo maty ireo. Manazava ny ao ambadiky ny anton'ny fahatohinana mafy nahazo ireo Armeniana i Ianyan .
Nianjera tao Irana ny fiaramanidina iray vita Rosiana, an’ny Caspian Airlines, hisidina ho any Yerevan any Armenia, ny Alarobia taorian’ny nirehetany teny am-panidinana ary namono ireo olona 168 tao anatiny rehefa nitontona tany an-tsaha akaikin’ny tanànan’i Qazvin, 16 minitra monja taorian’ny fiaingana.
Tanora valo mpikambana ao amin'ny ekipa Iraniana mpanao judo sy Armeniana maromaro no isan'ireo namoy ny ainy, ka ny roa tamin’izany dia anisan’ny mpiandraikitra ilay fiaramanidina. Eo amin’ny Armeniana 100 000 eo no mipetraka any Irana izay mivezivezy matetika eo anelanelan’ireo firenena roa ireo mba mitsidika havana.
Maro ireo antsipiriany voafantina avy amin’ny tati-baovao any an-toerana sy maneran-tany no naparitaka haingana tamin’ny Twitter sy Facebook, iray amin'ireo tena miparitaka be ny @unzippedblog.
Ny maro tamin’ireo tsikera tamin’ny vohikala sosialy sy lahatsoratra tanaty blaogy tao amin’ilay vondrom-piarahamonina fitorahana blaogy LiveJournal momba ilay fianjerana tany Armenia dia saiky mifototra amin'ireo vaovao azo avy amina masoivohom-baovao sy haino aman-jery hafa.
Ilay blaogy Iraniana-Armeniana ՏՐԱՄԱԳԻԾ [AM] kosa dia tsy hoe namoaka sarin’ilay voina fotsiny fa sady nanome dikantenin’ireo tatitry ny TV-mpanjakana Iraniana amin'ny teny Armeniana.
Niainga teo amin’ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenenan’i Tehran ilay fiaramanidina “Tupalov” ary nianjera tany akaikin’ny faritra Khazin 16 minitra taorian'izay. […] Vao niteny teo ny Filohan’ny Repoblika Ahmadinejad, naneho ny fiaraha-miory ary niteny ireo tompon’andraikitra mba hanao fanadihadiana lalina, mba hanao izay tokony atao, hitady ny anton’ity fianjerana ity ary hitatitra izany araka izay haingana azo atao.
Any anatina lahatsoratra hafa, nitatitra tamin’ny antsipiriany mombana Armeniana iray, Harutyun Khalghatian, izay tsy nahatratra ny fiaingan'ny fiaramanidina ilay mpitoraka blaogy.
Harutyun Khalghatian, 44 taona, nanao fitsidinana arahan'asa tany Tehran no sady nitsidika an'i Tehran dia avotra tamin'ny fomba tsy takatry ny saina. Tanatina fanadihadiana natao tamin'ny naman’i Khalghatian iray …. nahita izahay fa nanao fety izy ny alina talohan’iny, ka nahatonga azy tara fifohazana ka tsy nahatratra ilay sidina.
Լճակ [RU] dia nanome rohy sy fanampim-baovao momba ilay fianjerana, ary ilay mpanao gazety-mpitoraka blaogy mpanohitra Mark Grigorian kosa dia nanome ny heviny manokana tamin’ny fampiasana fiaramanidina efa antitra.
“Fotoana fanovàna ireny fiaramanidina vita sovietika ireny ho korontam-by izao, ” hoy izy, nanampy tao amin’ny faritra natokana ho an'ny tsikera:
Indrisy fa efa tonta, tsy ara-batana ihany fa ara-moraly koa, ireny fiaramanidina sovietika ireny. Mieritreritra aho fa isan’izay antitra ara-moraly izay ity iray ity.
@Unzippedblog dia nandefa tweet ny fanontaniana ao an-tsain’ny rehetra hoe:
Fa maninona no #Iran irery eto ambonin'ny tany no mbola mampiasa iny fiaramanidina Rosiana TY-154 antitra be iny! Tokony ho ariana ireny. #armenia #yerevan.
Nanome valin-teny tamina tweet iray hafa izy taorian’izay.
Nanamafy ny BBC http://bit.ly/BpFW9 fa noho ny sazy nomen’ny Etazonia no mahatonga izao tsy filaminana eo amin’ny sehatra sidina any #Iran izao. #armenia #yerevan
Если бы можно было жить в море… [RU] dia mameloka ny ankivy nataon’ny Etazonia tamin’ny Iran noho ny fianjerana.
Andriamanitra anie hanome fiadanana ny fanahin’izy ireo… nisy ankizy roa tamin’ireo. Miteny ry zareo fa matetika no misy loza any Iran, noho ny fandraràna izay tsy mamela azy ireo hanavao ireo fiaramanidina ary ny fiaramanidina TU sy Amerikana no tena ananan-dry zareo.
Ireo hafa toa an-dry Words Blog dia mitantara ny fomba nahafantaran’ny havany an’ireo maty.
“Nisy teknisiana fifamoivoizana an'habakabaka roa izay niasa tao amin’ny Caspian tao anatin’ilay fiaramanidina. Izaho tsy nahafantatra azy ireo, fa ny reniko sy ny nenitoako no niara-niasa tamin’izy ireo.”
“Tany amin’ny seranam-piaramanidina aho androany… mampalahelo…” hoy 517 Design nanoratra [RU], mpitoraka blaogy sy mpaka sary avy tany amin’ny seranam-piaramanidin’i Yerevan niaraka tamin’ny sary.
© Sarin'ny PanARMENIAN / Sedrak Mkrtchyan
30 Jona 2021Azia Afovoany sy Kaokazy
Ao Armenia taorian'ny ady, ny fahalalahan'ny asa fanaovana gazety no petahan'ireo mpanao lalàna
14 Jona 2021Azia Afovoany sy Kaokazy
31 Marsa 2021Azia Afovoany sy Kaokazy